News Collection: कमरेड जनार्दनको अस्पतालमा आगो लाउने धम्की
कमरेड जनार्दनको अस्पतालमा आगो लाउने धम्की
काठमाडौं, फागुन २९ । एमाओवादीका नेता तथा लडाकुका पूर्वकमाण्डर जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' को जनमैत्री अस्पताल आर्थिक अभावका कारण गम्भीर घाइते भएको छ। अस्पातालले सामान्य उपचारका लागि जीवनजलसमेत पाउन छाडेपछि अस्पतालकै लागि नयाँ डाक्टरको खोजी हुन थालेको छ। शर्माको अस्पताल नै विरामीले थलिएपछि कर्मचारी पनि बिचल्ली पर्ने भएका छन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार खगेन्द्र शर्माको नेतृत्वमा तीन वटा समूह नयाँ लगानीकर्ताका रुपमा अस्पतालमा छिरेका छन्। विवादास्पद तथा तस्करी काण्डमा मुछिएको नोबल मेडिकल कलेजका लागनीकर्ता हुन् खगेन्द्र शर्मा। खगेन्द्रका भाइ सुनिल शर्मा नोबलमा बसेर दाजु खगेन्द्र जनमैत्रीमा आएका हुन्।
सुनिलले नोबल मेडिकल कलेजमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई निकालेर एमाओवादी नेता बर्षमान पुन अनन्तलाई सेयर दिएको र वाइसीएल लगाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अपहरण गरी कुटपिट गरेको घटना चर्चित छ। तिनै शर्मा परिवारलाई प्रभाकरले फागुन १८ गते औपचारिक रुपमा अस्पताल भित्र्याएको छ।
यो टोलीलाई अस्पताल ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएको भनेर प्रचार गरिएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार लिजमा नभई औपचारिक रुपमा बिक्री गरिएको हो। प्रभाकरले अस्पताल बिक्री गरिसकेको तर पार्टीमा सेफ ल्यान्डिङका लागि लिजमा दिएको प्रचार गरेको एमाओवादीका एक नेताले जानकारी दिए। फागुन २१ गतेबाट नेता प्रभाकरका नातामा मामा पर्ने कृष्ण शर्मालगायतको टीमलाई बिदाइ पनि गरिसकिएको छ। सोही प्रकरणलाई लिएर फागुन २१ गते अस्पताल परिसरमा कृष्ण शर्मा र नयाँ लगानीकर्ता खगेन्द्र शर्माबीच झगडा समेत भएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार 'तँ किन आएको? तेरो हैसियत के हो? मेरो अस्पतालमा तँ आउने कुनै अधिकार छैन, तुरुन्तै निस्किहाल। तँ मलाई निकाल्न आएको होइन? मलाई निकालेको भोलिपल्ट अस्पतालमा आगो लगाइदिन्छु 'भन्दै कृष्ण शर्मा खगेन्द्रमाथि जाइलागेको एक प्रत्यक्षदर्शीले भने। सो दिन अस्पतालमा प्रभाकर पनि पुगेका थिए।
फागुन २१ गते नयाँ लगानीकर्तासँग प्रभाकरको पहिलो बैठक थियो। हुन त,सोही दिन कृष्ण शर्मालाई फोन गर्दा दाङमा आमा विरामी भएर गएको भनेका थिए। सुरुमा आफ्नो मान्छे भनेर जनार्दनले ल्याएका भए पनि ७ हजार तलब खाने पियनलाई जागिरबाट निकालेर कृष्णले आफ्नी श्रीमतीलाई २० हजार रुपैयाँ तलबमा जागिर खुवाएको घटनापछि प्रभाकर पनि सन्तुष्ट नरहेको अस्पतालका कर्मचारीको भनाइ छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार जनार्दनपछि अस्पतालमा कृष्णका आफन्तहरु बढी छन्।
बैंक पनि डुब्ने
अस्पताल अहिले घाटामा मात्रै होइन, तिर्नुनपर्ने ठाउँ कहीँ पनि बाँकी नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। अस्पताल स्राेतका अनुसार ६५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी डुबेको जनमैैत्री अस्पतालले ऋण दिने बैंकलाई पनि डुबाउने अवस्था छ। नयाँ लगानीकर्ता आएलगत्तै बैंकमा जमानत बस्नेहरु सबैजना अस्पतालबाट निकालिएका छन्। कृष्ण शर्मा, उनकी श्रीमती, कृष्ण खनाललगायतका व्यक्ति अस्पतालबाट औपचारिक रुपमा निकालिएका छन्। अस्पतालले उनीहरुको जमानतमा बैंकबाट ऋण लिएको थियो। हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा ११ वटा बैंकबाट लिएको ऋण साँवा व्याज गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। हिमालयन बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक लगायतका बैकले ऋण दिएका हुन्।
शर्मा एण्ड कम्पनी
जनार्दन शर्मा र लिटिल एञ्जल्सका उमेश श्रेष्ठले फागुन १८ गतेबाट औपचारिक रुपमा अस्पताल नयाँ पार्टनरलाई सुम्पिएका छन्। तर अस्पालतमा अधिकांश कर्मचारी भने उनीहरुकै आफन्तहरु छन्। २ सयभन्दा बढी प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीमध्ये अप्राविधिक कर्मचारी भने जनार्दनका रुकुमका आफन्तहरुमात्रै रहेको पनि बताइन्छ। नयाँ पार्टनर खगेन्द्र एण्ड गु्रपले माथिल्लो तहका केही कर्मचारीलाई भने बिदाइ गर्न थालिसकेको छ। कृष्ण शर्मा, कृष्ण खनालसहित लेखा प्रमुखलाई पनि बिदा गरिसकेको छ। तर, जनार्दनका सबै आफन्तलाई निकाल्न सक्ने अवस्था भने नरहेको अस्पतालका कर्मचारीको भनाइ छ। अस्पतालमा जनार्दनकी श्रीमती लक्ष्मी शर्माको बोलवाला पनि निकै थियो। लक्ष्मी जनार्दनसँगै काठमाडौंमा रहे पनि माओवादी लडाकुहरुको प्रमाणीकरणमा नाम राखिएको थियो। लक्ष्मीले स्वेच्छिक अवकास लिएकी छन्। अस्पतालका कर्मच्ारीले तलब पाउन पनि मुस्किल रहेको छ। उनीहरुको ९० दिनमा बल्ल ३० दिने हुने गरेको छ। अझ केही समय पहिला त झण्डै ६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका थिएनन। डेढ महिनाअघि प्रचण्ड निवासबाट २५ लाख रुपियाँ ल्याएर तलब दिइएको पनि अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। जनसेनाको रकम, अस्पताल चलाउन भनेर उठाइएको रकमको समेत यसमा लगानी छ। एमाओवादीमा पटक पटक यो कुरा उठ्ने गरेको भएपनि प्रचण्डले सामसुम पार्दै आएका छन।
कलेज पनि भद्रगोल
जनमैत्री अस्पतालले व्याचलर नर्सिङ (बीएन),विएस्सी नर्सिङ,व्याचलर फार्मेसीसहित ४ वटा प्रोग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ। जनमैत्री अस्पतालमा क्लिनिकल अभ्यास गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हो। त्यसैगरी उसले नेपाल नर्सिङ परिषद्लाई पनि आर्थिक प्रभावमा पारेर डेढ वर्ष पहिले सञ्चालन अनुमति लिएको थियो। अस्पतालमा बिरामी नै नआउने भएकोले अहिले अकुपेशन नपुगेको भन्दै नर्सिङ परिषद्ले ती कलेजलाई पटकपटक सचेत गराइरहेको छ। विद्यार्थीले क्लिनिकल अभ्यास गराउने अवस्था नै अस्पतालसँग नपाइएको नर्सिङ परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार लिटिल एञ्जल्सको भवन राम्रो भए पनि विद्यार्थीका लागि अकुपेशन नै नपुग्ने भएकोले कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।